TV mamono olona ve ny Youtube? | Martech Zone
TV mamono olona ve ny Youtube?
Alakamisy 3, 2011 Alakamisy 3, 2011 Douglas Karr
Raha izaho manokana dia mieritreritra aho fa hanana fahitalavitra mandritra ny androm-piainako ary avy eo ny sasany. Tsy toa an'ity sary ity, tsy mino aho fa maty ny fahitalavitra… mieritreritra fotsiny aho fa handalo fiovana izany. Miaraka amin'ny fantsona an-jatony, ny fahatongavan'i Tivo sy ny bandwidth avo lenta, inona naratra ny fahitalavitra no fiantraikan'ny dokambarotra… fa tsy Youtube. Ary ilay infographic etsy ambany dia miresaka momba ny vidin'ny anjaran'i Google, saingy tsy miraharaha ny fampisehoana fa tsy mahazo vola ihany koa ny Youtube!
Ny zava-bita, mazava ho azy, dia ny fahafahan'ny orinasa manangana doka horonantsary lafo vidy. Ny dokambarotra amin'ny fahitalavitra dia mety mitentina 60,000 XNUMX $ hamokarana. Tsy izay intsony! Afaka mampiasa fakantsary HD amin'ny findainao sy rindrambaiko fanovana maimaim-poana ianao izao hamokarana dokambarotra amin'ny ampahany kely amin'ny vidiny. Ka… hiaraka ny fanaovana dokambarotra video.
Raha ny amin'ny Youtube sy ny fahitalavitra… dia mifangaro izy roa. GoogleTV, AppleTV ary ny hafa dia efa manana fampiharana Youtube. Ireo mpanome tariby toa ny horonan-tsary Comcast na U-Verse toy ny Internet ihany. Misy ny fampitambarana ireo teknolojia roa mitranga - ary tiako izany!
Fampahalalana avy amin'i Freemake, mpamorona miavonavona an'ny Mpanova Youtube
Tags: fahitalavitratvdokam-barotra amin'ny horonan-tsaryYouTube
Toerana finday, fampiharana, kaody SMS & QR - Mahafinaritra sa ilaina?
Manimba ny varotrao ve ny sary ratsy? #BWELA
4 Nov 2011 tamin'ny 4:08 PM
Infographic mahafinaritra. Fonosina ao anaty fonosana ny mpamokatra. Te hahita olona ny olona.
4 Nov 2011 tamin'ny 4:17 PM
Fijerena tsara, Click! Manaiky aho fa tsy entanin'ny horonan-tsary mamirapiratra mamirapiratra intsony ny olona… olona tena izy, mandresy ny hafatra tena izy noho ny fahatsorany sy ny fahafahany mifandray manokana.
Mar 12, 2012 ao amin'ny 1: PM PM
Lahatsoratra tena mahaliana tompoko! Izaho koa tsy mino fa mamono TV ny Youtube, heveriko fa mamono tena ny TV! Fampisehoana cutter cookie be loatra, dokam-barotra, fandaharam-potoana ratsy, ary ny fandaharana ratsy rehetra amin'ny vidiny lafo izay tsy zakantsika tsotra izao amin'ny toekarena ankehitriny!